ब्रह्माण्ड र सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुने एक मात्र साँचो परमेश्‍वर—सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्‍ट! यो पवित्र आत्‍माको गवाही, निर्विवाद प्रमाण हो! पवित्र आत्‍माले जताततै गवाही दिन काम गरिरहनुभएको छ, ताकि कोही पनि शङ्कामा नहोऊन्। विजयी राजा, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर! उहाँ संसारमाथि प्रबल हुनुभएको छ, उहाँ पापमाथि प्रबल हुनुभएको छ, र उहाँले आफ्नो छुटकाराको काम पूरा गर्नुभएको छ। उहाँले शैतानद्वारा भ्रष्ट तुल्याइएका मानिसहरूको यो समूह, हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ, र उहाँको इच्‍छा पूरा गर्नको लागि हामीलाई पूर्ण तुल्याउनुभएको छ। उहाँले यो भूमिलाई फेरि कब्जा गर्दै र शैतानलाई अतल कुण्‍डमा लखेट्दै, उहाँले सारा पृथ्वीभरि राजकीय शक्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँ संसारमाथि न्याय गर्न बस्‍नुहुन्छ, र उहाँको हातबाट कोही पनि उम्कन सक्दैन। उहाँले राजाको रूपमा शासन गर्नुहुन्छ।
सारा पृथ्वीले उच्‍च सोरमा हर्षोल्लास गर्छ! यसले विजयी राजाको—सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको प्रशंसा गर्छ! सदासर्वदा! तपाईं आदर र प्रशंसाका योग्य हुनुहुन्छ। ब्रह्माण्डका महान राजालाई नै अख्‍तियार र महिमा होस्।
समय छोटो छ। सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका पाइलाहरू पछ्याऊ र अघि बढिरहो। गल्ती नगर्नलाई अति सावधान बन, उहाँको बोझप्रति विचारशील होओ, उहाँसँग एकै मनका होओ, र उहाँको व्यवस्थापन योजनाको लागि आफूलाई अर्पण गर। तिमीहरूले आफ्‍ना सम्पत्तिहरूलाई आफ्‍नो निम्ति साँच्‍नु हुँदैन। समय निकै थोरै छ। तिनलाई चढाइहाल! तिनलाई साँचेर नराख! तिनलाई चढाइहाल! तिनलाई साँचेर नराख!